अधिकतम समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान समझाई: मार्टिन Vrijland
अधिकतम समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान समझाईयो
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	14 जून 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
मैले प्रायः अधिकतम रूपमा बारे बोलेको छु समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान। हालैका वर्षहरूमा हामीले अधिक र अधिक हत्याका घटनाहरू र मिडियामा अन्य घटनाहरू देखेका छौं जसमा यसले ध्यान दिएका छन् कि यो मनोवैज्ञानिक अभियान (पीएसओपीएस) मानिसहरू खेलिरहेका छन्। धेरै लेखहरूमा मैले वर्णन गरेको छु कि खेल कसरी समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान कार्यहरू र यो कसरी हालसालैका समयका ज्ञात हत्याका घटनाहरूमा लागू हुन सक्छ। त्यसैले म, उदाहरणका लागि, साँच्चै तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु यो लेख en यो लेख यहाँ जारी राख्नु अघि फेरि पढ्न राम्रो छ। यो लेखमा लेखिएका भिडियोहरू र भिडियोहरू दुवै राम्ररी अध्ययन गर्न साँच्चै सार्थक छ।
यी सबै घटनाहरु र मीडिया द्वारा चौंकाने र छल को सबै उपयोग, कठोर कानून को लागी स्वीकृति मोड मा र अधिक पुलिस राज्य उपायों को लागि, मलाई एक गीत बनाउन को लागि प्रेरित। तपाइँ तल रहेको भिडियोमा (लिङ्ग कोठा) ध्वनि रेकर्डिङ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
नियम समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान धेरैजसो सरकारहरू, मिडियासँग संयोजन, मानिसहरूलाई एउटा मुख्य समस्याको रूपरेखा। सामान्यतः यो एउटा स्वयं निर्मित बनाइएको समस्या हो। फिल्म स्टूडियो प्रविधिको माध्यमबाट ग्रीन्सस्क्रिन टेक्नोलोजी, गहिरोफेकहरू, अनुहार पुनर्जन्म र अनुहार स्वैप सफ्टवेयरको माध्यमबाट सिर्जना गरिएको। यदि तपाइँ माथि लिङ्क गरिएका लेखहरूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ ती प्रविधिको विस्तृत व्याख्या पाउनुहुनेछ।
जनताले चीजहरूमा चिसो लगाइरहेका छन् जसले गहिरो भावनाहरूलाई तीव्र बनाउँछ र मिडियाले मानिसहरूमा भावनात्मक प्रतिक्रियालाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्दछ। गहिरो प्रविधि पनि सोशल मिडिया निगरानी गर्न प्रयोग गरिन्छ। सैकड़ों घरका कर्मचारीहरूले पूर्णकालिक छलफलको निरीक्षण गर्दै र विश्वसनीय गहिरो प्रोफाइलको साथ समान रूपमा विश्वसनीय सामाजिक (गहिरो) सञ्जालसँग लुकेका छन्, तपाईं इच्छित दिशामा कुनै पनि अनलाइन छलफल भइरहन सक्नुहुनेछ र फरक व्यक्तिको बारेमा धेरै फरक पार्नुहुन्छ। त्यसोभए मानिसहरु को प्रतिक्रिया को साकार गर्न सकिन्छ, तर यो पनि फैल सक्छ। किनभने तपाईं टुरल सेनाको माध्यमबाट जनसंख्या बीचको भावनालाई पठाउनुहुन्छ र ट्राल सेनाको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्नुहुन्छ, तपाईले नयाँ व्यक्तिलाई नयाँ व्यवस्थाको लागि तयार पार्नु भएको छ जुन उनीहरूले आफैले बनाएको समस्या (पीएसओपी) बिना कहिल्यै स्वीकार गर्नुभएन।
म केही समयको लागि एक गीत बनाउन चाहान्छु, किनभने संगीतले लेखहरू भन्दा राम्रोसँग सम्बोधन गर्छ। तपाईंले यो उपयोगी पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ वा तपाईले यो प्रयोग गर्नुहुनेछ यदि तपाइँ मानिसहरूलाई दैनिक नकली समाचारहरू कसरी खेलाउने भनेर कसरी देखाउने प्रयास गर्नुहुन्छ।
तपाईं परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ र छनौंटहरू छनौट गर्नुहोस्!
पीटर एम। (त्यो विश्वसनीय बहनबाट जेरोन पउव सम्म) फेरि पक्राउ गरिएको छ
अन्जा स्काप पहिले नै एक PsyOp साबित भयो? किन हेर्नुहोस् (भिडियो)
ट्याग: गहिराइ, deepfakes, अनुहार, facewap, अनुहार, विशेष, गीत, नकली समाचार, सञ्चालनहरू, समस्या, मनोवैज्ञानिक, psyop, प्रतिक्रिया, पुन: निष्क्रिय, सफ्टवेयर, समाधान, गीत, अधिकतम, स्वाप, वर्णन गरियो, भिडियो
14 जून 2019 मा 08: 04
यदि मैले nu.nl मा प्रतिक्रियाहरू पढ्छु भने समाधान अनिवार्य छ 💉 💉 💉
व्यक्तिगत रूप मा, मलाई लाग््छ कि7मा 10 वास्तव मा अब र पछि को बकवास मा विश्वास गर्दैन।
14 जून 2019 मा 14: 14
Lmfao nu.nl ... यो नियन्त्रण मीडिया छान्नु हो ... 10 वर्ष पहिले उनले यो उत्पादन गरेको हो, अहिले यो शुद्ध एड्स हो। एक निश्चित बिन्दुमा TPO जस्तै, मेमोनिङहरूले यसलाई पाउँछन् किनकि तिनीहरू छाला बोल्छन् किनकी तिनीहरू अत्यधिक कठोर छन् र जंगलीहरूलाई पूजा गर्छन्। यही कारणले उनीहरूको टिप्पणी अब सेंसर भएको छ र तपाईं दानको माध्यमबाट सदस्य हुनुहुन्छ भने मात्र जवाफ दिन सक्नुहुनेछ।
जब तपाईं मिडिया र राजनीति पछि चलाउनुहुन्छ भने तपाई साँच्चै एक कठिन कुक हुनुहुन्छ, एक प्रकारको मसीह जटिलले उद्धारकर्ताको लागि पर्खिरहेको छ। तपाईंसँग 70-वर्ष-पुराना व्यक्ति स्टकहोम सिन्ड्रोम भएको छ जसले स्लायशीपूर्वक उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनलाई विश्वास गर्दछ। यो शायद एक7/ 10 हुन सक्छ जुन अनिवार्य टीकाकरण गर्न चाहन्छ .. मलाई लाग्छ कि मानिसहरू टीकाकरणका लागि (अझै पनि बेवकूफ) तर आवश्यक पर्दैन।
तपाईं निश्चित रूप देखि कसैको लागि समस्या को समाधान गर्न को लागी इंतजार नहीं गरेर रहयो ... बस सुनिश्चित गर्नुहोस कि स्थायी अराजकता पैदा हुन्छ जसलाई यहां सम्म कि अभिजात वर्ग नियंत्रण नहीं मिलन सक्छ। अराजकताको एजेन्डासँग जारी रह्यो कि कुलीनले वर्षको लागि प्रचार गरिरहेको छ
मजदुर दास लेखे:
14 जून 2019 मा 11: 03
राम्रो छ ... यो लम्बाई ...
अब मेरो सम्पूर्ण टाउकोमा अब दिनको धुन छ!
यसैले ... जो मान्छे एक अधिवेशन मालिक को लागि काम गर्दछ, उदाहरण को लागि:
विशेष गरी धुन सुन्न नपाओस्, किनभने तपाईं दिनभरि लामो धुनमार्फत गाउन सक्नुहुनेछ किनकि सहकर्मीहरूले आफ्नो काम प्रणालीमा राख्नको लागि ध्यान दिन सक्दैनन्! कल्पना गर्नुहोस् ...
14 जून 2019 मा 12: 00
बाउडट: मास आप्रवासन र असंतोष रोक्न त्यसो भए इत्र्रायलमा टमाडुडिक केपपिल्टजेको रक्षा गर्न सक्नु हुन्छ ... इत्रेल जसले युरोपमा आप्रवासीहरूलाई पठाउँदछ। Lmfao ... तिनीहरू पनि एफडीएमा ईयू विरोधी छन् र त्यसपछि यूरोपीय संघको संसदमा भाग लिन्छन्। कस्तो मजाक
14 जून 2019 मा 16: 42
मेरो क्षेत्रमा म मार्टिनको गीतमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू सुन्छु; धेरै सकारात्मक देखि नकारात्मक।
मेरी राय अनुसार र स्वाद गायन एकदम कम छ, तर मलाई लाग्छ गिटार शानदार छ!
संयोगवश, यो गीत एक राम्रो तरिकाले सुसज्जित स्टूडियो मा उत्पादन गरिएको छैन, जहाँ टेक्नोलोजी राम्रो आवाज राम्रो बनाउन सबै सम्भव बनाउँछ। यसबाहेक, मार्टिन व्यावसायिक रूपमा सक्रिय छैन, तर केवल एक मिशन छ: मानिसहरू जुन तिनीहरू अदृश्य जेलमा बस्छन् देखाउँछन्, जबकि उनीहरूले आफैंलाई राख्ने र यो जेल पनि विस्तार गर्न मद्दत गर्छन्।
तर के मैले गल्तीको बारेमा के सोच्न सक्छु? मार्टिन रचनात्मक र अभिव्यक्ति भएको छ र इन्टरनेटमा नतिजा राख्नु भएको छ। धेरै मानिसहरू आफैमा यो गर्छन्, तर मार्टिनलाई एक ठूलो टोल सेनाले हेर्दै आएको छ, जसले उनीहरूलाई लुटेको उद्देश्यको लागि छुटकारा दिन हरेक अवसरलाई गुमाउँछ।
जब म वरपर हेर्छु, म धेरै थोरै व्यक्तिहरू देख्न चाहन्छु जुन रचनात्मक र अभिव्यक्तिको हिम्मत थियो। मानिसहरू "जस्तै तिनीहरू" गर्नुपर्छ व्यवहार। यसबाहेक, समयको पासोमा, प्रणालीले सृजनात्मक हुन र रचनात्मकता व्यक्त गर्ने अवसरको मानिसहरूलाई अव्यवस्थित गर्दछ। सामाजिक वांछनीय व्यवहार वातावरणमा निर्भर गर्दछ जुन व्यक्तिले आफैलाई पाउँछ। यद्यपि, यो सबै तथाकथित सामाजिक रूपमा वांछनीय व्यवहार कलेज र इन्डोक्ट्रेशनको परिणाम हो, जुन समय र संस्कृतिको प्रचलित आत्मामा निर्भर छ। चाल यो कुरा हो कि समय र संस्कृति को यो प्रचलित भावना वांछित व्यवहार संग, पुरा तरिकाले वर्तमान शासनों द्वारा नियंत्रित छ, जो गुप्त दुनिया भर मा पूरी प्रणाली को नियंत्रित गर्दछ। विधानले पनि यो सुनिश्चित गर्दछ कि जन को वांछित व्यवहार को भविष्यवाणी को सटीकता बढायो, ताकि जन को बेहतर नियंत्रित हुन सक्छ।
जो मान्छे "जस्तै" बस्नु भएका मानिसहरू अझै पनि ध्यान दिदैनन् कि तिनीहरू पूर्णतया भइरहेका छन् कि शासकहरू चाहन्छन्। यी मानिसहरू राम्रो भेडा वा मरेका माछाहरू जुन प्रवाह संग जान्छन्। यी मरेका माछाहरू गम्भीर रूपमा वा कुनै पनि गल्ती गर्दैनन् किनभने, तिनीहरू जीवित लाश हुन्, जुन प्रणालीद्वारा पूर्णतया नियन्त्रण गरिन्छ। मृत माछा, जुन उच्च छ, प्रणालीलाई लात लगाउन व्यवस्थित गरिएको छ र प्रायः सूट वा सूटमा छिटो छ, सबै भन्दा सख्त र मुर्खा माछा माछा हुन्छ। यी माछाहरू एक-अर्काको हात समात्छन् जब उनीहरूले लोभ वा अन्य आत्म-केन्द्रित लक्ष्यबाट चीजहरू धोका गर्छन्। यसको अतिरिक्त, शक्तिमा ती ती सेतो कलरहरू हराउँदैनन्, किनकि यी सेतो कलरहरू जनताको कानुन र नियमहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनु आवश्यक हुन्छ। तलका कार्यकारी तह, एजेन्टहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरू, सामान्यतया थाहा छैन कि (ठूलो) एजेन्डा तिनीहरूले सेवा गर्छन्।
तपाईले कम र कम व्यक्तिहरू देख्नुहुनेछ जुन आफ्नो साँचो पहिचान व्यक्त गर्ने हिम्मत (जहाँसम्म उनीहरूले फेला पारेका छन्)। सम्मानित कार्यालयको एक वकीलले छिटो इन्टरनेटमा यस्तो भिडीयो राख्दैन ... सबै पछि, यो सही छैन। यस प्रकारका मृत मछुआहरू आफ्नो अहंकारले बनाए राख्ने एक नकली संसार छ र केवल आफ्नो साँचो प्रकृति मात्र एक निराश तरिकामा देखाउँदछ।
NAZI जर्मनीमा त्यहाँ मानिसहरू पनि थिए जुन उनीहरूले थोरैमा राखे जस्तो व्यवहार गरेनन्। यी मान्छेहरू जीवन असंभव बनाइयो। अहिले हामी बाँच्ने समय NAZI जर्मनीको 1930 को दशकमा तुलना गर्न सकिन्छ। सबैलाई जर्मनी र बाकी युरोपको के भयो थाहा छ। जनताहरू हेर्न चाहँदैनन् कि हामी एक पटक फेरि बाँच्न सक्छौं। प्रणाली कायम राख्ने व्यक्ति "go-geters" हुन् "सकारात्मक मनोवृत्ति" जसले "जस्तै" गर्नुपर्छ। जबसम्म यो सेटिङ जनताको ड्राइभिङ्ग बल बनी रहन्छ, नयाँ वर्ल्ड अर्डर एउटा तथ्य हुनेछ।
माट्टिनलाई बिर्सन्छ ... एक जीवित माछा जसले हिसाब गर्छ!
14 जून 2019 मा 16: 49
र जब यो गायन गर्न आउछ, ठूलो चिसो वास्तवमै मद्दत गर्दैन, तर म यो घण्टा पूरा गर्न चाहँदैनन्।
कसलाई थाहा छ, हुन सक्छ म त्यस पछि गर्नेछु।
यद्यपि, म स्पष्ट लेख लेख्न फोकस गर्न चाहन्छु।
सकारात्मक प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!
« ब्रान्ड 'रिचार्ज', ट्रम्प, ब्रेक्सिट (र यसमा जडान भएका सबै चीजहरू) को नियमन विनाश
यदि भविष्यवाणीहरू पूरा भएमा, के तपाईंको धारणा सत्य हुन् कि त्यो प्रमाण हो? »
कुल भ्रमण: 16.158.831
घटना २०१ cor कोरोना भाइरस व्यायाम वुहान प्रकोप हुनुभन्दा weeks हप्ता अघि, समान अवस्थाको नक्कल गर्दछ
क्यानाडा: चिनियाँ डा। Xiangguo Qiu र वुवान भाइरस जैविक युद्ध समाधान को लागी चीन मा निर्भर गर्दछ
कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1
आजका युवाहरू पुनः-शिक्षा शिविरहरू (ग्लागहरू) जलवायु नकार्न भर्न चाहन्छन्
चीनबाट कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी खोप दायित्व को लागी उत्तम alibi प्रदान गर्दछ
सनशाइन op घटना २०१ cor कोरोना भाइरस व्यायाम वुहान प्रकोप हुनुभन्दा weeks हप्ता अघि, समान अवस्थाको नक्कल गर्दछ
SandinG op घटना २०१ cor कोरोना भाइरस व्यायाम वुहान प्रकोप हुनुभन्दा weeks हप्ता अघि, समान अवस्थाको नक्कल गर्दछ
Riffian op क्यानाडा: चिनियाँ डा। Xiangguo Qiu र वुवान भाइरस जैविक युद्ध समाधान को लागी चीन मा निर्भर गर्दछ
हरे op लिबियाले स्पष्ट पार्छ कि युरोपमा कुन देशहरू टर्कीले लिनेछ
विश्लेषण गर्नुहोस् op चीनबाट कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी खोप दायित्व को लागी उत्तम alibi प्रदान गर्दछ